महिला र बालबालिका पीडितका पीडितै- विचार - कान्तिपुर समाचार
लेखक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सदस्य हुन् । प्रकाशित : चैत्र १२, २०७५ ०८:३५
त्यो अनुत्तरित प्रश्न
गाउँभरका केटाकेटी चोकमा जम्मा भएर माघे नाचको तयारीमा थिए त्यस दिन । दुई दिनअघि नै सानीले यसपालि तिमीले पनि नाच्न जानुपर्छ है भनेर कर गरेपछि मैले नाइँ भन्ने कुरै थिएन ।
फाल्गुन ११, २०७५ मञ्चला झा
काठमाडौँ — आज मैले न उनलाई रोक्न सकें न त आफूलाई नै  । विचित्रको अवस्था भयो हाम्रो  ।
आज मैले न उनलाई रोक्न सकें न त आफूलाई नै । विचित्रको अवस्था भयो हाम्रो । उनी सुस्केरा हाल्दै कतिचोटि भक्कानिन् र मैले कतिचोटि टिस्यु पेपरले आफ्ना आँखाहरू पुछें, यादै भएन । बन्द कोठामा हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी थियो । उनले पहिला नै मबाहेक मेरो कथा कसैले थाहा पाउनुहुँदैन भनी सर्त राखेकी थिइन् । हुन पनि त्यो यस्तो कथा थियो जो मैले कसैलाई सुनाउने प्रश्न नै थिएन । उनको र मेरो पहिलो भेट एउटा कार्यक्रममा भएको थियो जहाँ न त उनी धेरै खुल्न चाहिन्र न मैले धेरै सोध्न नै उचित ठानं । त्यसपछि हाम्रो भेट आज अर्थात् २ वर्षपछि मात्र हुन पाएको थियो । हुन त त्यो पहिलो भेटको निरन्तरता हामीले टेलिफोन संवाद मार्फत जारी राखेका थियौँ । सुरुआती दिनमा उनी केही महिनासम्म मैले उनलाई दिएको नम्बरमा मिस कल हान्थिन् र म यताबाट उनलाई फोन गर्थें । हामीबीचको सम्बन्ध यसरी गहिरिंदै गयो कि उनले कुनै साता मिस कल गरिन् भने मलाई उनलाई केही पर्‍यो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्थ्यो ।
गजबको जादु थियो— उनको रूप लावण्य र वाणीमा जसले मलाई पहिलो भेटमा नै उनीप्रति आकर्षित गरेको थियो । हुन त म जुन कामका लागि खटिएकी छु, त्यस क्रममा सयकडौँ यी र यस्ता घटनाका पीडितलाई नभेटेकी होइन । र, सबैप्रति मेरो सहानुभूति माया र न्यायको प्रत्याभूति पनि समान नै थियो । तर, उनीसितको मेरो आत्मीयता खास हुनुको पछाडि बेग्लै कारण थियो । फोनमा उनको पहिलो प्रश्न नै हुन्थ्यो— दिदी चिया खानुभो ? अनि त्यसपछि क्रमशः हजुरलाई कस्तो छ ? हजुरलाई फेरि भेट्न मन लाग्यो, हजुरसित कुरा गरेर पनि निकै सन्तोष लाग्छ ।
आफ्नो पीडा र अभाव सुनाउनुभन्दा नि मेरो सन्चो–विसन्चोको ख्याल राख्ने र कुनै गुनासोबिना उनले गर्ने गरेको मसितको वार्तालापले यतिबिघ्न मलाई उनीप्रति तानेको थियो कि कहिलेकाहीं म उनको महानताको अगाडि आफूलाई तुच्छ ठान्थें । हो, यही कारण थियो जसले उनलाई मेरा लागि विशेष बनाएको थियो र म उनीप्रति बेपत्ता तानिएकी थिएँ । उनले यसरी फmोनमा बोलिरहने क्रममा मैले कहिले त्रमभंग गरिनँ र न त कहिले उनीसित भएको घटना सम्बन्धमा कुनै प्रश्न नै तेर्साउन उचित ठानें । उनी जे जति बोलेर हलुंगो हुन चाहन्थिन्, म ती सबै सुनेर थोरै भए पनि उनलाई हलुको पार्न चाहन्थें । यसरी उनी र मबीच करिब दुई वर्ष टेलिफोन संवाद जारी रह्यो । आज दुई वर्षपछि जब उनले मलाई भेटिन्, हाम्रो बीचको धकको सीमा पार भइसकेको थियो । सायद त्यसैले होला हामी टाढा भएर पनि एक अर्कासित निकै निकट थियौँ र हाम्रोबीचको त्यो घनिष्ठताले नै उनलाई मेरो अगाडि खुल्न सहज बनाएको थियो । बिस्तारै उनी खुल्न थालिन् ।
दसैँ–तिहारको भन्दा पनि हाम्रोमा मनाउने सबभन्दा ठूलो चाड झनेको माघे संक्रान्ति नै हो । एक साताअघिदेखि नै माघे संत्रान्तिको रमझम गाउँमा सुरु भइसकेको थियो । पुसको कठ्यांग्रिने जाडोले पनि कसैलाई केको छेक्थ्यो र ? गाउँभरका केटाकेटी चोकमा जम्मा भएर माघे नाचको तयारीमा थिए त्यस दिन । दुई दिनअघि नै सानीले यसपालि तिमीले पनि नाच्न जानुपर्छ है भनेर कर गरेपछि मैले नाइँ भन्ने कुरै थिएन । काग डाक्नुअघि नै बिछ्यौना छाडेकी थिएँ त्यस दिन मैले । सुकुलमा ओछ्याएको थाँग्नो र सिरकमा गुटुमुटु परेर न्यानो भइरहूँ लागे पनि आमाले हिजो साँझ नै बिहानै आँगन लिप्नुपर्छ है कान्छी भनी अह्राउनुभाथ्यो । यसपालिको माघीमा हाम्रोमा मामा–माइजू पनि आउने भनेपछि आमाको मात्र हैन मेरो मन पनि फुरुंग थियो । घरीघरी मामा–माइजूले यसपालिको माघीमा उपहारमा ल्याइदिने कल्ली लाएर नाच्ने सोचले मन कुतकुत्याएको थियो मेरो । चाँदीको कल्ली ! आहा मेरो गोडामा कति सुहाउँला है भर्खर १२ पुगेर १३ मा टेकेको वसन्तकालीन यौवनमा सोच पनि कतिथरि आउँदो हो । आखिर रमाउनलाई सपना हेर्ने छुट त सबैलाई छ हैन र ? बरु साकार हुनु र नहुनु छुट्टै कुरो तर सपनाले धनी र गरिबबीच कुनै अन्तर कहाँ देख्छ ! आज त झन् मेरो बाल्यकालको सपना पूरा हुँदै थियो । अर्थात् यसपालिको माघीमा म पनि साथीहरूसित गोडामा चाँदीको कल्ली लाएर नाच्नु जो थियो । त्यस बिहान कतिचोटि मैले मेरो निदाउँदो अनुहार ऐनामा हेरें भनी साध्य छैन । अघिल्लो रात नै आमाले अह्राउनुभएजस्तो काग डाक्नुअघि नै पुसको जाडोमा नि आँगन लिपेकी थिएँ म त्यस बिहान । मान्छेको मनमा उमंग हुँदो हो त जेठको धुप वा माघको कठ्यांग्रिने जाडोले पनि केही गर्न कहाँ छेक्दो रहेछ र ? आजको उमंगको वेग त झन् थामीनसक्नु थियो । मामा–माइजूले ल्याइदिनुहुने कल्ली पाउमा लाएर नाच्ने भएपछि आज सबले मतिर नै त हेर्ने होलान् नि पोहोर माघीमा रमदैयाले चाँदीको हँसुली लाएर नाचेपछि मुक्तकण्ठले सबैले प्रशंसा गरेको कुरो आमाले सुनाउनुभएको अझै याद छ मलाई ।
पुसको अन्तिम साता बाक्लो कुहिरोले धुम्म परेको आकाश बिहानको सात बज्न लाग्दा नि अन्धकारले घेरेको तर चोकमा म पुग्दा बाटुली सानी मन्तोरीलगायतका मेरा सबै दौंतरीहरूको भीड लागिसकेको थियो त्यस दिन । टाढैबाट मलाई हेरेपछि पुलकित हुँदै सानीले भनिन्— ओहो, उजेली किन ढिलो गरेकी हँ ? हामी त अघिदेखि नै तँलाई कुरेर बसिराथ्यौँ । कस्तो निश्छल र स्निग्धपूर्ण बालापन थियो हाम्रो । गाउँभरिका केटाकेटी हामी जम्मा हुन्थ्यो डन्डी–बियो खेल्नुदेखि छुरसम्मको खेल होस् या पोखरीमा वंशीले माछा मार्नु सबमा अघि सर्थें म । त्यसैले त दौंतरीहरूको प्यारो बनेकी थिएँ । आमा सधैं भन्नुहुन्थ्यो— आँटेली छोरी छे कमाएर खान सक्छे । तर, आमाकी ती आँटेली छोरी कति निरीह बनिन् त्यस दिन ।
‘सुराकी गर्छेस् ? तँ...’ भनी हुत्याउँदै आठ जनाको समूहमा आएका ती नरपिशाचहरूले नुहाउनलाई बाँध्न लागेको पेटिकोटको तुनालाई पनि राम्ररी कस्न दिएनन् र अर्धनग्न शरीरलाई घसार्दै छातीमा बुट बजार्दै लगे । बिहान चोकमा माघी नाचको छलफल सकिएर दिउँसो खोलामा नुहाउन भनी गाउँका एक हूल केटाकेटी खोला पुगेका थियौँ हामी । बालुवा छ्यापेर जिस्किँदै गरेको बाल्यपनको त्यो रमाइलो खेल नै अन्तिम भयो मेरा लागि । त्यसपछि सुरु भए ती कहालीलाग्दा क्षणहरू । अचानक आएको त्यो हूलले तितरबितर बनाएको हाम्रो समूहबाट को कता गए, केही थाहा भएन । आँखामा कालो पट्टी बाँधिदिएपछि यो संसार नै अँध्यारो भयो मेरा लागि । त्यसपछि कसले कतिपल्ट खेले यो देहसित, होसै भएन । १२ वर्षे कलिलो ज्यानलाई कतिचोटि केरकार गरे केही पत्तो पाइनँ । १५ दिनपछि जंगलको एक झाडीमा त्यही पेटिकोटमा बेरिएको मेरो देहमा प्राण त बाँकी थियो । तर, चेतनशून्य रहेछु म ।
‘आमा कसम मेरो मुटुमा एक मुठी सास रहुन्जेल म तँलाई छाडदिनँ । मार मलाई, जति मार्नु छ मार ! धिक्कार छ तेरो यो कायरपूर्ण मर्दाङ्गीलाई । थुक्क नरपिशाच !’ होस आउँदा मैंले यही वाक्य दोहर्‍याएछु ! ‘सिस्टर सिस्टर बेड नं १०३ को बिरामीलाई होस आएजस्तो छ’, नजिकै बेड नं १०२ की आफ्नी बिरामी छोरीको कुरुवा बसेकी एक आमाले चिच्याउँदै भनिन् । मलाई अस्पतालसम्म कसले पुर्‍याए थाहा भएन । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ला, म बाँचेछु । तीन महिनाको अस्पताल बसाइमा मलाई जन्म दिने आमा पनि किन भेट्न आउनुभएन होला भन्ने वास्तविकता त पछि पो थाहा भयो मलाई, जब घर लिन आउने मेरो मामाले बताउनुभयो । त्यस दिन मामा हाम्रो घरमा आउने खबर तिनीहरूले पहिला नै थाहा पाइसकेका रहेछन् र मामाले पनि आफ्नो ज्यानमाथि खतरा रहेको पत्तो पाएपछि हाम्रोमा आउनुभएन रहेछ । तर, मामालाई कहाँ लुकाएर राखिस् भन्दै मेरी आमालाई आँगनबाट चोकसम्म लछार्दै लगेको र आमाको कारुण्य विलापको साक्षी बनेका गाउँलेहरू चुइँसम्म बोल्न आँट गर्न सकेनन् । त्यो एउटा यस्तो त्रासदीपूर्ण समय थियो जहाँ आफ्नो ज्यान रक्षाका निम्ति झूटलाई नि साँचो र साँचोलाई झूट भनेर स्विकार्नुपर्ने विवशता । आकाश–धर्ती सबै मौन भएको अवस्था ।
मेरी निर्दोष आमाको विलापले ती निष्ठुरीहरूको कानलाई नै बहिरा बनाएको हुनुपर्छ सायद । त्यसैले होला, उनको कारुणिक चीत्कारले तिनलाई छोएन र लछार्दैपछार्दै पर चौरतिर लगेर उनीसित पनि गर्नसम्म गरेछन् र, पछि उनको शरीरलाई चिरा पारेर फालेका रहेछन् । बोल्दाबोल्दै अवरुद्ध भएको गलालाई विश्राम दिँदै उनी नजिकै टेबुलमा राखिएको सिसा गिलासबाट घुटघुट पानी एकै सासमा पिउँदै फेरि थपिन्— थाहा छ हजुरलाई म जुन कोखबाट जन्मे,ं ती आमा र मेरो कोख दुवै गुमाएकी छु मैले । म पलासको फूल भएछु । हो, सुगन्धहीन फूल जो हेर्दा आकर्षक भए नि देउतालाई चढ्दैन । मेरो रूप र सौन्दर्यको गुणगान गर्ने हजार छन् । तर, मेरो यथार्थ बुझेर मलाई अपनाउने आजसम्म कोही भेटेकी छैन मैले । फेरि भक्कानो छुट्यो र उनको कपकपाउँदो ओठले दोहोर्‍यायो म अब कहिले आमा बन्न सक्दिन । उनको त्यो अन्तिम वाक्यमा छुपेको वेदनाको गहिराइमा कहाँसम्म पुगें म, थाहा छैन । तर, आजसम्म उनको त्यही वाक्यले मलाई पछ्याइरहेको छ । उनको भक्कानोसँगै आफूलाई आफैं सम्हालें मैले । शब्दमा केही सम्झाउनु या बुझाउनुभन्दा यतिखेर निःशब्द नै रहनु बेस थियो मेरा लागि किनकि आज मैले उनलाई हल्का पार्नु थियो । १२ वर्षअघिदेखि उनको अन्तर मनको पीडाको पोको बिसाउँदै उनी फेरि आक्रोश र पीडा मिश्रित स्वरमा थपिन्, तपाईं नै भन्नुस् मेरो के कसुर थियो ? मैले कस्तो न्याय पाउने हो ? पहिलो र अन्तिमचोटि उनले सोधेका ती प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न धेरै कोसिस गरें मैले । कतिपटक एक्लै केही गर्ने आँट र साहस नि नजुटाएको हैन तर अपसोस चाहेर पनि गर्ने परिवेश पाइनँ मैले र आजसम्म ती प्रश्नहरूबारम्बार मन मस्तिष्कमा आएर ठोक्किन्छन् र कम्प पैदा गरी अन्तरआत्माले सोध्छ के म असफल भएकी हुँ ?
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ ११:५५